Banyere Anyị - Shandong Shallow Yong Import and Export Co., Ltd.
Deep uzo Ball Iburu
* Tụkwasị na Roller biarin
Tapered ala biarin
Shandong Shallow Yong Bubata na Export Co., Ltd.
Ndị anyị bụ？
Shandong qianyong ibubata na mbupụ ahia Co., Ltd. bụ a na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ na-amị emeputa tụnyere R & D, mmepụta na ahịa. E hiwere ya na 1987 ma debanye aha ya dị ka Shandong qianyong mbubata na mbupụ ahia Co., Ltd. na 2019, ọ na-arụ ọrụ na-abụghị ọkwa, pụrụ iche na izugbe biarin.
Nkà & Ahụmahụ
Mgbe afọ asatọ nke nnukwu ọsọ mmepe, amị ji nwayọọ nwayọọ na-amali itu-n'ihu development si obere ka nnukwu, si adịghị ike na ike. Ngwaahịa sitere na imewe, nyocha na mmepe na ngwaahịa ikpeazụ, ha niile sitere na ụlọ ọrụ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ amalitela usoro njikwa na njikwa nke ịkọwapụta, nhazi, nhazi, usoro na data, ma nwee ngwa ọrụ mmepụta ụwa. CNC akụrụngwa na-eji mezue ikpeazụ usoro nke mbịne, na CNC nke-egweri na finishing usoro ruru 100%. N'otu oge, abụọ uzo isi egweri akụrụngwa na-eji abụọ n'usoro amị nhazi. Ke adianade do, CNC vetikal lathe na CNC vetikal na-eji ihe na nnukwu nnukwu ogbako, na ziri ezi ọkwa nke oversized ngwaahịa nwere ike iru P5, nke ozokwa mma nke ziri ezi nke ngwaahịa. Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị 300 ụdị nke na-abụghị ọkọlọtọ biarin na pụrụ iche biarin niile n'afọ, na SL / NCF zuru kwajuru cylindrical ala (sl181840-sl1818 / 500, sl183024-sl183080, sl182924-sl182980, ncf1840-ncf18 / 500, ncf3024- ncf3-80, ncf2924-ncf2980) di n'uju. O kwesịrị ekwesị maka onye na-akpacha ajị anụ, onye na-ebubata ihe, hydraulic pump, engineering engineering, ore, metallurgy, oilfield shipbuilding na ọrụ ndị ọzọ. Deep uzo bọl agba (ịnyịnya ụdị, ụdị), eletriki gwara mmanụ agba, * Tụkwasị na agba agba (Ca, MB, e, E1), SL / NCF zuru kwajuru cylindrical ala (sl181840-sl1818 / 500, sl183024-sl183080, sl182924-sl182980, ncf1840-ncf18 / 500, ncf324-ncf3-80, ncf2924-ncf2980) zuru ezu. O kwesịrị ekwesị maka onye na-akpacha ajị anụ, onye na-ebubata ihe, hydraulic pump, engineering engineering, ore, metallurgy, oilfield shipbuilding na ọrụ ndị ọzọ.
Advanced technology, magburu onwe ya mma, na-ekpo ọkụ na-echebara echiche mgbe-sales ọrụ ka Futai ịzụlite ngwa ngwa na dị nnọọ afọ ole na ole, na aghọwo ndị kasị ibu mmepe na n'ichepụta enterprise na Asia maka reducer nke ihe iga ụgbọala, akpacha ajị, haịdrọlik mgbapụta spindle amị na emighị emi Yong Iburu. Nọgide na-akwado echiche mmepe ọhụụ nke "sayensị na teknụzụ dị ka ike, ịdị mma maka ndụ", nke mere na mmepe nke ụlọ ọrụ na-amị, qianyong amị abụghị naanị na-agbaso iduzi ụlọ, kamakwa kpebisiri ike ịbanye ụwa na-amịpụta ubi. The ngwaahịa na-bụ-eji na Ngwuputa na nkà mmụta banyere ígwè, na-ewu ụlọ ígwè, igwe ngwaọrụ na Motors, na e rere nke ọma na ihe karịrị iri mba na mpaghara na Europe, Southeast Asia na Middle East.
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara anyị
ase maka pricelist
Okwu: A-1403-8, ọlaọcha ngọngọ, West Minghu Road, Tianqiao District, Jinan City, Shandong Province
Ekwentị: 0086 16536352555